ဒီကနေ့ ခတျေကွီးထဲမှာ ကနြျောတို့လူငယျတှေ အတု တကယျယူတတျကွဖို့ လိုပါတယျ…. – Nyi Ma Lay
ဒီကနေ့ ခတျေကွီးထဲမှာ ကနြျောတို့လူငယျတှေ အတု တကယျယူတတျကွဖို့ လိုပါတယျ….
By Nyi Ma LayPosted on January 14, 2021 January 15, 2021
စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျ MTV တဈခုမှာ စတိုငျပငျကို ခါးပတျမပတျဘဲ ဝတျထားတာ သဘောကလြို့ လိုကျဝတျတယျ။ တောသားမွို့တကျ လို့ ပွောခံလိုကျရတယျ၊၊ ဖစျေ့ဘှတျ တညျထောငျသူ မာ့ချဇူကာဘတျကို အားကလြို့ဆိုပွီး အလုပျကို တီရှပျနဲ ဂငျြးဘောငျးဘီ ဝတျသှားလိုကျတယျ။ မနျနဂြော ချေါသတိပေးတာ ခံလိုကျရတယျ၊၊
ဦးကြျောသူကို အားကလြို့ မုတျဆိတျမှေး ပါးသိုငျးမှေး လိုကျထားတယျ။ အလုပျအပျဖို့ စုံစမျးတဲ့သူတှေ တဈယောကျမှ မလာတော့ဘူး၊၊ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး မိနျ့ခှနျးတှေ ပွညျသူတှေ ခုထိမမနေို့ငျသေးတာကို ကွညျ့ပွီး ကနျြးမာရေးဟောပွောပှဲမှာ “ခငျဗြားတို့ကိုယျ့ကနျြးမာရေးမှ ကိုယျဂရုမစိုကျလို့ကတော့ အကုနျလုံး -ာသညျရှာ ဖွဈကုနျမယျ”လို့ သှားပွောတယျ။ တဈရှာလုံး ဓါးမနဲ့ ထှကျခုတျလို့ မနညျးပွေးလာရတယျ၊၊
ဖနျခှကျတဈခှကျရဲ့ တနျဖိုးဟာ အပွငျမှာ ခွယျသထားတာတှနေဲ့ မဆိုငျပါဘူး၊၊ အထဲထဲမှာ ရသေနျ့သနျ့ ပါလာဖို့ကသာ အရေးကွီးတာပါ၊၊ လူတှကေလညျး အထဲကရေ သနျ့တာကိုသာ တကယျယုံကွညျသှားရငျ အပွငျမှာ ဘယျလိုပဲ ခွယျသထား ခွယျသထား၊ နရောပေးကွစမွဲပါပဲ၊၊
ဒါပမေယျ့ အဲဒီလို တနျဖိုးရှိတဲ့ ဖနျခှကျတဈခှကျဖွဈဖို့ အရငျဆုံးလုပျရမှာက ရသေနျ့သနျ့တှနေဲ့ ပွညျ့နအေောငျ လုပျဖို့ပါ၊၊ အပွငျက ဒီဇိုငျးကို အရငျအတုယူရမှာ မဟုတျပါဘူး၊၊
ဖကျရှငျဟာ လူတဈယောကျကို အတိုငျးအတာတဈခုထိ ယုံကွညျမှု ရှိစပေါတယျ၊၊ ဒါကွောငျ့ ဖကျရှငျမျောဒယျတဈယောကျဆီက အတုယူရမယျဆိုရငျ သူ့အသားအရညျ၊ အရပျအမောငျးနဲ့ အခြိုးအစားအလိုကျ အဆငျပွအေောငျ ဝတျစားဆငျယငျတတျတာကို ယူရမှာ ဖွဈပါတယျ၊၊ သူဝတျတဲ့အတိုငျး တဈပုံစံတညျး လိုကျဝတျရမှာ မဟုတျပါဘူး၊၊
မာ့ချဇူကာဘတျကို သဘောကရြမှာက စှနျ့ဦးတီထှငျတတျတဲ့စိတျ၊ ရိုးရိုးရှငျးရှငျး နတေတျတဲ့စိတျ၊ အလှူအတနျးရကျရောတဲ့စိတျတှကေိုပါ၊၊ ပှဲလမျးသဘငျတိုငျး တီရှပျလိုကျဝတျဖို့က အဓိက မကပြါဘူး၊၊
မုတျဆိတျမှေး ပါးသိုငျးမှေး လိုကျထားတိုငျး ဦးကြျောသူလို တနျဖိုးရှိတဲ့ လူတဈယောကျ ဖွဈမလာပါဘူး၊၊ ကိုယျ့ရဲ့နစေ့ဉျဘဝမှာ ကွုံဆုံလာသမြှ လူအားလုံးကို တတျနိုငျသလောကျ ကူညီမယျဆိုတဲ့ ပရဟိတစိတျမြိုးနဲ့ ရှငျသနျနထေိုငျဖို့ကသာ အဓိကလိုရငျး ဖွဈပါတယျ၊၊
ကိုယျ့ကိုယျကြိုးအတှကျ လုံးဝမစဉျးစားဘဲ တိုငျးပွညျလှတျလပျရေးရဖို့ပဲ ကွိုးပမျးခဲ့တဲ့ ဗိုလျခြုပျရဲ့ စတေနာနဲ့ အရညျအသှေးကို ပွညျသူအားလုံးက နားလညျပွီးသား ဖွဈပါတယျ၊၊ ဒါကွောငျ့ ဘယျလိုစကားလုံးမြိုး သုံးပါစေ ပွညျသူတှကေ စိတျမဆိုးတဲ့အပွငျ ခပျဘှငျးဘှငျးပွောတတျတယျဆိုပွီး ပိုတောငျ သဘောကသြှားခဲ့ကွပါသေးတယျ၊၊ ဒါပမေယျ့ ဗိုလျခြုပျရဲ့ အဲဒီစိတျဓါတျနဲ့ စတေနာတှေ၊ အရညျအခငျြးတှေ မရှိပါဘဲ နယျလှညျ့ပါးရိုကျလာတာ ဆိုတဲ့စကားမြိုး ပွညျသူကို သှားပွောရငျတော့ ပွညျသူတှရေဲ့ ဝဖေနျမှုနဲ့ပဲ ကွုံရပါလိမျ့မယျ၊၊
ခုခတျေလူငယျတှမှော စံထားစရာ role model တှေ မရှိကွဘူးလို့ ပွောကွပါတယျ၊၊ တကယျတော့ နယျပယျအသီးသီးမှာ စံထားစရာ ပုဂ်ဂိုလျတှအေမြားကွီး ရှိပါတယျ၊၊ သတငျးနညျးပညာကလညျး ဖှံ့ဖွိုးလာတာကွောငျ့ သူတို့အကွောငျးတှကေို အလှယျတကူ လလေ့ာလို့လညျး ရလာတယျ၊၊ အမှနျက အတုယူစရာ လူမရှိတာ မဟုတျပါဘူး၊၊ အတုယူလှဲနကွေတာသာ ဖွဈပါတယျ၊၊
အတုယူလှဲတ ယျဆိုတဲ့နေ ရာမှာ ကိုယျကငျြ့ တရားနဲ့ လုပျရပျ ကောငျး တဲ့သူထကျ ခမျြးသာမှု၊ နာမညျကြျောကွားမှုတှသေကျသကျကိုပဲ ပိုပွီးအားကနြေ တတျကွတာမြိုး ပါသလို၊ တကယျအရေးကွီးတဲ့ အနှဈသာရပိုငျးကို အတုမယူ မိဘဲ အပျေါယံရှပျ အတုယူနကွေတာလညျး ပါပါတယျ၊၊ ကနြျောတို့လူငယျတှေ အတု တကယျယူတတျကွဖို့ လိုပါတယျ၊၊
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် MTV တစ်ခုမှာ စတိုင်ပင်ကို ခါးပတ်မပတ်ဘဲ ဝတ်ထားတာ သဘောကျလို့ လိုက်ဝတ်တယ်။ တောသားမြို့တက် လို့ ပြောခံလိုက်ရတယ်၊၊ ဖေ့စ်ဘွတ် တည်ထောင်သူ မာ့ခ်ဇူကာဘတ်ကို အားကျလို့ဆိုပြီး အလုပ်ကို တီရှပ်နဲ ဂျင်းဘောင်းဘီ ဝတ်သွားလိုက်တယ်။ မန်နေဂျာ ခေါ်သတိပေးတာ ခံလိုက်ရတယ်၊၊
ဦးကျော်သူကို အားကျလို့ မုတ်ဆိတ်မွှေး ပါးသိုင်းမွှေး လိုက်ထားတယ်။ အလုပ်အပ်ဖို့ စုံစမ်းတဲ့သူတွေ တစ်ယောက်မှ မလာတော့ဘူး၊၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်းတွေ ပြည်သူတွေ ခုထိမမေ့နိုင်သေးတာကို ကြည့်ပြီး ကျန်းမာရေးဟောပြောပွဲမှာ “ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကျန်းမာရေးမှ ကိုယ်ဂရုမစိုက်လို့ကတော့ အကုန်လုံး -ာသည်ရွာ ဖြစ်ကုန်မယ်”လို့ သွားပြောတယ်။ တစ်ရွာလုံး ဓါးမနဲ့ ထွက်ခုတ်လို့ မနည်းပြေးလာရတယ်၊၊
ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ အပြင်မှာ ခြယ်သထားတာတွေနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး၊၊ အထဲထဲမှာ ရေသန့်သန့် ပါလာဖို့ကသာ အရေးကြီးတာပါ၊၊ လူတွေကလည်း အထဲကရေ သန့်တာကိုသာ တကယ်ယုံကြည်သွားရင် အပြင်မှာ ဘယ်လိုပဲ ခြယ်သထား ခြယ်သထား၊ နေရာပေးကြစမြဲပါပဲ၊၊
ဒါပေမယ့် အဲဒီလို တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ဖြစ်ဖို့ အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာက ရေသန့်သန့်တွေနဲ့ ပြည့်နေအောင် လုပ်ဖို့ပါ၊၊ အပြင်က ဒီဇိုင်းကို အရင်အတုယူရမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊၊
ဖက်ရှင်ဟာ လူတစ်ယောက်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ယုံကြည်မှု ရှိစေပါတယ်၊၊ ဒါကြောင့် ဖက်ရှင်မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဆီက အတုယူရမယ်ဆိုရင် သူ့အသားအရည်၊ အရပ်အမောင်းနဲ့ အချိုးအစားအလိုက် အဆင်ပြေအောင် ဝတ်စားဆင်ယင်တတ်တာကို ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊၊ သူဝတ်တဲ့အတိုင်း တစ်ပုံစံတည်း လိုက်ဝတ်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊၊
မာ့ခ်ဇူကာဘတ်ကို သဘောကျရမှာက စွန့်ဦးတီထွင်တတ်တဲ့စိတ်၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း နေတတ်တဲ့စိတ်၊ အလှူအတန်းရက်ရောတဲ့စိတ်တွေကိုပါ၊၊ ပွဲလမ်းသဘင်တိုင်း တီရှပ်လိုက်ဝတ်ဖို့က အဓိက မကျပါဘူး၊၊
မုတ်ဆိတ်မွှေး ပါးသိုင်းမွှေး လိုက်ထားတိုင်း ဦးကျော်သူလို တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်မလာပါဘူး၊၊ ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာ ကြုံဆုံလာသမျှ လူအားလုံးကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ ပရဟိတစိတ်မျိုးနဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ကသာ အဓိကလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်၊၊
ကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးအတွက် လုံးဝမစဉ်းစားဘဲ တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရဖို့ပဲ ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ စေတနာနဲ့ အရည်အသွေးကို ပြည်သူအားလုံးက နားလည်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်၊၊ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုစကားလုံးမျိုး သုံးပါစေ ပြည်သူတွေက စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် ခပ်ဘွင်းဘွင်းပြောတတ်တယ်ဆိုပြီး ပိုတောင် သဘောကျသွားခဲ့ကြပါသေးတယ်၊၊ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အဲဒီစိတ်ဓါတ်နဲ့ စေတနာတွေ၊ အရည်အချင်းတွေ မရှိပါဘဲ နယ်လှည့်ပါးရိုက်လာတာ ဆိုတဲ့စကားမျိုး ပြည်သူကို သွားပြောရင်တော့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဝေဖန်မှုနဲ့ပဲ ကြုံရပါလိမ့်မယ်၊၊
ခုခေတ်လူငယ်တွေမှာ စံထားစရာ role model တွေ မရှိကြဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်၊၊ တကယ်တော့ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ စံထားစရာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီး ရှိပါတယ်၊၊ သတင်းနည်းပညာကလည်း ဖွံ့ဖြိုးလာတာကြောင့် သူတို့အကြောင်းတွေကို အလွယ်တကူ လေ့လာလို့လည်း ရလာတယ်၊၊ အမှန်က အတုယူစရာ လူမရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး၊၊ အတုယူလွဲနေကြတာသာ ဖြစ်ပါတယ်၊၊
အတုယူလွဲတ ယ်ဆိုတဲ့နေ ရာမှာ ကိုယ်ကျင့် တရားနဲ့ လုပ်ရပ် ကောင်း တဲ့သူထက် ချမ်းသာမှု၊ နာမည်ကျော်ကြားမှုတွေသက်သက်ကိုပဲ ပိုပြီးအားကျနေ တတ်ကြတာမျိုး ပါသလို၊ တကယ်အရေးကြီးတဲ့ အနှစ်သာရပိုင်းကို အတုမယူ မိဘဲ အပေါ်ယံရှပ် အတုယူနေကြတာလည်း ပါပါတယ်၊၊ ကျနော်တို့ လူငယ်တွေ အတု တကယ်ယူတတ်ကြဖို့ လိုပါတယ်၊၊
Previous post ကွိုးစားနတေဲ့ အခြိနျမှာဘဲ Facebook Page ကို Taiwan hackerတှေ ယူထားတာ ခံနရေကွောငျးကို ဝမျးနညျးစှာ ပွောပွလာတဲ့ ”ဆောငျးဝတျရညျမေ”
Next post အခြိနျကွာမွငျ့လာပီဖွဈတဲ့ လော့ဒေါငျးကာလတှေ မှာ လူသားတှကေို လှမျးလှနျးလို့ ပငျလယျထဲကနေ လကျဆောငျတှယေူလာပေးတဲ့ လငျးပိုငျလေးတှေ